Hibiscus | Tantsaha anaty aterneto | January 2020
Ahoana ny fisafidianana ny voninkazo any ivelany izay tsy mitaky fikarakarana manokana
Ilaina ny trano fametrahana trano ho an'ny olona mba hamorona trano fanatanjahan-tena tsy mavesatra. Raha tsy manary ny toetra tsara indrindra amin'ny fikarakarana kely, ny voninkazo tsara tarehy tsy maoderina dia ahafahanao miala sasatra sy tsy miteniteny. Sansevieria Teschin fiteny, afrikanina afrikana, tavy lava - izay tsy mitovy amin'ny hoe sansevieriya.
Nahoana no antsoina hoe voninkazon'ny fahafatesana ny hibiscus?
Ny rose rose na hibiscus dia trano fonenana fanta-daza sy malaza, na dia efa ela loatra aza dia nomena ny karazana zava-miafina samihafa. Maro ny famantarana sy finoanoam-poana mifandray amin'ny hibiscus, nefa manana toetra ilaina ihany koa. Fantatrao ve? Ny voninkazo hibiscus mena dia manatrika eo amin'ny akanjon'ny Maleziana, ary ao an-drenivohitra dia misy Hibiscus tsara tarehy, izay ahitàna zavamaniry mihoatra ny 2 arivo.
Ahoana ny fikarakarana hibiscus indoor
Hibiscus dia solontenan'ny fianakaviana malvaceae, manana voninkazo, tsara tarehy, marevaka ary marevaka, manondro ny tendrony, ravina emeralda. Nalefa tany amin'ny tontolo tropikaly. Noho ny hatsaran-tarehiny ivelany sy ny fiteniny, dia mihalehibe izy io toy ny voninkazo ao an-trano, mihinana koa ny hibiscus, asehony amin'ny endriny ary ampiasaina amin'ny fanaovana loko.
Fifantenana ireo zavamaniry tsara indrindra ho an'ny zanakao
Manomana efitrano ho an'ny ankizy iray ny ray aman-dreny tsirairay miezaka hifidy ireo zavatra tena ilaina sy azo antoka. Izany koa dia mihatra amin'ny voninkazo any amin'ny trano fivarotam-panafody, satria mandritra ny fotoana maharitra dia ho mpiara-monina amin'ny zanakao izy ireo. Hiresaka momba ny fomba hanaovana safidy tsara isika ary tsy hanao fahadisoana ato amin'ity lahatsoratra ity. Fantatrao ve? Ny zaza dia ho liana fa tsy amin'ny zavamaniry ihany, fa koa ao anaty vilany izay hampitomboany.
Nahoana no tsy misy kapoaka? Saingy tonga ny fotoana misy ny dite mainty sy maitso, ary ny fanampiana isan-karazany dia tsy mamonjy. Plus, ny dite maitso dia misy kafeinina mihoatra noho ny kafe, ary mety be dia be mihitsy aza ny habetsahana. Avy eo dia tonga hanampy ny voninkazo toy ny hibiscus. Hibiscus dia manana tsirony hafakely, loko mahafinaritra, ary tsy manonona ny toetra mahasoa ny hibiscus.
Lisitry ny karazana hibiscus
Ny Hibiscus amin'ny fahasamihafana rehetra dia misolo tena manerana izao tontolo izao. Ireo voninkazo mahafinaritra avy amin'ny fianakaviana malvova mahazatra ao amin'ny honko sy ny kolontsaina dia hita ao amin'ny endriky ny hazo sy ny tanimboly ary ny karazan-javamaniry isan-taona, ny hazo madinika, ny voangory ary ny indostrialy. Ao amin'ireo tongolobe mirefotra tondra-drano any Azia atsimo atsinanana, izay toerana alehany, dia afaka mankafy ireo kirihitr'ireo tsiranoka marefo miaraka amin'ny felana lehibe.
Misafidiana ny karazam-borona tsara indrindra omena
Ny fampiofanana tsara sy ny fitambarana ireo zavamaniry samihafa dia manana anjara toerana manan-danja amin'ny fampifangaroana ny tontolon'ny zaridaina. Ny fitsangatsanganan-tsakafona tsara ho an'ny zaridaina dia mampifaly ny maso ary manamboatra azy amin'ny lohataona ka hatramin'ny fararano amin'ny fararano. Miaraka amin'ny fanampian'ny hazo kesika, afaka mampivelatra ny tontolon'ny zaridaina ianao, mizara ny faritany ary mampiditra fitaratra vaovao.
Ny fomba hanakanana ny tsaramaso amin'ny ririnina ao an-trano
Famonoana bibikely - steppe pestrus
Sakafo ambony 10 ho an'ny salohy salady makadiry ao Beijing miaraka amin'ny cucumbers sy voatabiha
Popular Lahatsoratra, 2020
Ahoana no ahafahana manisy menaka vaovao amin'ny ririnina ao amin'ny fonosana ao an-trano?
Inona no tokony hatao amin'ny iris taorian'ny voninkazo: ny fitsipika fototra momba ny fikarakarana
Ny tombony sy ny tsy fahampian-tsakafon'ireo Tomato "Rivotra Wind", indrindra fa ny fambolena voatabia voatabia
Ahoana no hamahana voatabia mandritra ny voankazo?
Tsy mihalehibe, ary amin'ny karazana varim-bazaha Vityaz
Copyright 2020 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Hibiscus